Uwe eji edozi ejiji kachasị mma 2018 maka ụmụ nwanyị n'obere ntutu, obere na ogologo
Ejiri ejiji edozi 2018 ka ha kwadoro oyiyi e kere eke ma mesie ike ihu. Site n'enyemaka nke ntutu, ị nwere ike zoo ezughị okè nke mputa, gbanwee ihu ihu ihu, mee ka ihe mara mma ma mee ka onyinyo ahụ doo anya na echefu echefu.
Hairstyles 2018 - ejiji ejiji
Ndị na-ede akwụkwọ na-ejide n'aka na n'afọ 2018, a na-atụ anya ka a ghara iji nlezianya na-eleghara anya, ịdị mma na ịdị ọcha. Nke a gosipụtara ọnọdụ dị ugbu a na Hairstyles 2018, n'etiti nke ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị a:
Ngwunye dị iche iche nke na-enweghị atụ na nchịkọta na-adịghị mma adịkwaghị na-emekarị, a na-anọchi anya ha na obere curls na-adịghị mma, ọ bụghịkwa ihe nkwado dị nro.
Ogwe dị oké ọnụ n'akụkụ ya ga-abụ nhọrọ na-egbuke egbuke, kere maka 2018. Maka ya, ọ dị mkpa ịhọrọ oke nke akụkụ ahụ, nke ga-ele anya nke ọma na ya.
N'ihe elongated strands ụdị nsị niile ga-adị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịba mma pigtails, nke na-esi n'egedege ihu gaa n'azụ olu. Ụmụ agbọghọ nwere ike ịgbanwere ụdị uwe ndị ọzọ dị iche iche na ejiji dị iche iche.
N'ihe dị n'ogologo, ogologo ntutu dị iche iche ga-ele anya na-enweghị atụ, na ejiji ejiji edozi edozi 2018 site na otu ụzọ nkwụsị.
Maka obere oge, otu n'ime ntutu isi kachasị ewu ewu ga-abụ "bean", nke nwere ike ịgbakwunye ya ma ọ bụ na-enweghị ya.
Ejiji edozi isi maka ogologo ntutu 2018
Enweghi ike iche echiche n'echeghi site n'ichezi isi edozi maka ogologo ntutu isi na 2018, ị nwere ike ịcheta ụdị ọnọdụ a:
Na ogologo curls mara mma, ha mkpa nlekọta pụrụ iche. Ruo ogologo oge, olu adịghị ejide ogologo oge, ya mere, ka ị ghara ịbanye na ụyọkọ mgbe niile na curls nọgidere na-adọrọ mma, ị nwere ike ịhọrọ ntutu isi gị. Nhọrọ a ga-ewu ewu na 2018 ma nye onye nwe ya amara.
Ogologo ntutu isi nwere ike ime mkpụmkpụ n'ihu ma mepụta ihe a na-akpọ "ụda ihu". Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịkpọtụrụ "cascade", gbutuo ogologo oge dum.
A ga-eji ejiji na-eme ihe na-emepụta ejiji, nke a ga-eji eji curling iron ma ọ bụ curlers.
Enwere ike ịbanye n'akụkụ ọnụ ma ọ bụ tinye ya n'akụkụ, ka ha wee nwee ihu.
Nke zuru oke dabara adaba maka ụdị ịkwa ákwà niile, n'ime ihe okike nke ị nwere ike igosi na i chepụtara .
Nnukwu edo edo edozi edozi edozi 2018, bunches na ọdụ elu.
Iji na-edozi ma ọ bụ n'ụzọ dị irè na-etinye curls, obere fringe ga-adabara nke ọma.
Ejiji edo edo edo edo edo edo edo edo edo edo
Achọsi ike n'etiti ndị inyom na-edozi isi maka ịjụ ntutu isi bụ 2018, ha na-ahapụ gị ịnwale, ma ịchọghị nlezianya anya. Iji nọgide na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị, ọtụtụ ụmụ nwanyị na-enweta ntutu isi mara mma, n'etiti ha nwere ike ịmata ọdịiche dị otú ahụ:
"Cascade", ebe ebili mmiri ebili n'akụkụ ya;
"Quads" na ezigbo silhouette geometric;
ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-eji ụdị nnwale ahụ dị ka ntutu ma ọ bụ na-akpụ isi , na-emepụta ihe ndị mbụ. A na-ebuli ntutu isi elu ma ọ bụ na-agba n'akụkụ n'akụkụ, na-ekpuchi ogwe osisi maka ikiri, ma ọ bụ daa, na-eme onyinyo nwanyị na ihe mara mma;
nhọrọ maka ndị chọrọ ịmepụta ụda olu na isi isi ntutu - nke a bụ elongated "agwa". Ị nwere ike ọ bụghị naanị na ịmepụta otutu akpụkpọ anụ ejiji ejiji 2018, kamakwa na-enye ha ihe na-eme ka a na-ele anya. A na-enweta nke a site na iji ọdịiche dị n'etiti ihe nkpuchi - a ga-enwe obere ntutu isi na azụ isi, na elongated square n'ihu.
Uwe isi maka ntutu isi 2018
Ụmụ nwanyị na ịma mma nwere obere ejiji 2018, ha ga-edozi ụmụ nwanyị nwere ụdị ihu. N'ime ha, anyị nwere ike ịkọ ọdịiche dị otú ahụ:
Ihe oyiyi dị iche na 2018 ga-enyere aka mee mkpụmkpụ ntutu isi na ọnụ ọgụgụ nke geometric, ebe a na-egbutu oge imechi na akụkụ nke isi, okpueze ahụ anaghịkwa agagharị.
Ọbụna ị nwere ike ịkọ aka n'ogo ogologo ebe a ga-eji agba agba bendy ma ọ bụ caramel, nke ga-abụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke 2018.
"Bob" dị mkpa na afọ na-esote ọ bụla gbanwere, ọ nwere ike ịdịzie, ntụgharị, na mgbakwunye nke obere oge ma ọ bụ ogologo.
Ejila ejiji "pixy", ebe eriri ndị a na-akpọ na-adịgide na okpueze ahụ, na ihe ndị ọzọ e kpochapụrụ kpamkpam.
N'ebe ndị a na-ehichapụ, ị nwere ike ịmepụta ụkpụrụ ma ọ bụ tee ha na agba dị ọcha, nke nwere ike inyekwu okwu olu na-egbuke egbuke.
Ụdị ejiji ejiji ejiji ejiji eji ejiji edozi 2018 na-eme ka ha nwee ike ịmaliteghachi, ha ga-ele anya dị mma, ma na-agbanwe agbanwe.
Uwe ejiji nke nwanyi 2018
Iji họrọ edozi edozi 2018, ịkwesịrị ịga ụdị ejiji na chọpụta ogologo ntutu. O di nkpa ikpebi ihe ndi di otua dika udi ihu, udi ocha , ihe okike ma obu nke ocha. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị ọdịiche dị iche iche:
Uwe isi na bangs 2018
Akpụcha ntutu kachasị mma nwere ike ịmalite gbanwee site n'enyemaka nke osisi ndị dị iche iche. Ha na-enwe ike icho mma ọ bụla n'ime edozi edozi ndị inyom eji eme ihe ngosi 2018, e gosipụtara bangs n'ụdị dị iche iche:
ị nwere ike ịga n'ihu, ma ọ bụ na ị nwere ike ịmepụta ihe ndị ọzọ na-emepụta nke akụkụ ahụ dị n'akụkụ, nke na-agba ma ọ bụ nke mgbatị;
Ị nwere ike ịnwale ogologo dị iche iche, ọ nwere ike ịbụ obere bank ma ọ bụ ogologo;
Dika nkenke di nkpa gadi na ememe n'afo 2018, obu ezie na odigh uru iburu umu nwanyi ndi nwere udi madu;
Ebube elongated kwesịrị inwe ọdịdị geometric, na ndụmọdụ ya kwesịrị ịgbatị na nku anya;
ezipụ na-adabara n'ụzọ zuru okè n'ime ihe ọ bụla ma na-ese nnọọ mma;
nhọrọ ọzọ bụ atụmatụ dị mma, ebe ọnụ ụlọ ndị ahụ adịghị adaba, ma jiri nwayọọ na-emegharị ogologo oge.
Uwe ejiji na ịcha ákwà 2018
Di na nwunye di nma na ndi nwere obi uto bu ndi edozi edozi nke nwanyi nke 2018, nke enyere ya aka n'igbu. Ị nwere ike ịmata ụdị ọdịiche dị iche iche nke imewe:
afụ ọnụ, nke na-agafe na ọdụ. Ọ bụrụ na i chebaa ogologo oge dum, mgbe ahụ, pigtail nwere ike ịchọta nanị n'akụkụ elu ma ọ bụ ruo n'etiti;
nke mbụ na-achọ ịkwado efere n'ọdụ;
ntakịrị ihe edozi edozi edozi 2018 nke nwere otutu ihe nke nwere ugbo. Ọ na-esi na ala ala elu, mgbe ị na-eji nsụgharị nke oge ochie;
Ọkpụkpụ ọkpụkpụ a na-atụghị anya ya na braid braided anya dị oke. Otu ihe atụ nke ebe a bụ ịkwa ákwà mmiri.
Ejiji edozi ejiji 2018
Otu ederede bụ ihe edozi edozi maka ụmụ nwanyị na 2018, bụ ebe a na-etinye aka na mgbatị. N'ime ha, anyị nwere ike ịhọrọ ihe ndị a:
mgbe mgbe ihe ndị dị otú ahụ nwere "pixy", bụ ebe a na-eji ụlọ akụ dị ogologo, a na-acha ọkụ ọkụ na obere oghere na-eme ka e jiri ya rụọ ụlọ nsọ. Ihe ndị a niile na-eme ka olu dị elu;
akpaghasị ihe na-eme ka o kwe omume na ọ gaghị egbochi nwanyị ahụ na ịkpụcha na ịcha. Enwere ike itinye ya na akụkụ ọ bụla nke isi: n'ihu, n'akụkụ ma ọ bụ azụ nke isi. Kedu ụdị echiche a họọrọ, ọ ga-ele anya nke ọma na nke mbụ;
obere bekee a na-atụghị anya ya nwere ike inwe mgbatị, ọ dịghị mkpa ịbịaru ezigbo ntụ;
A na-eji ejiji akpụkpọ ụkwụ eme ihe na nsụgharị ya na ụlọ e ji esiji, ma ị nwere ike ịhọrọ ogologo oge dị iche iche nke ntutu.
A na-eji ákwà ejiji na-eme ka ụlọ nsọ 2018
Ọtụtụ ndị na-edepụta ihe na-eji usoro edo edo edo edo 2018, bụ nke a na-eji ejiji nke ụlọ nsọ eme ihe. A pụrụ itinye akụkụ a n'ụzọ zuru ezu n'ogologo ọ bụla, ị nwere ike ịnwale nha nke nchara akpịrị. Ọ nwere ike dị warara ma dị obosara, ya na ihe eji eme ihe. Ihe ịchọ mma nwere ike igosi agba dị iche iche, nke a na-etinye aka na ebe a na-achọgharị. Nke a ga-abụ edo edo edozi 2018 maka ụmụ agbọghọ nwere otu ụlọ nsọ, nke a na-arụ na ogologo oge ma ọ bụ dị mkpirikpi. N'ebe a, enwere ike iji blọg mee ihe, ntụgharị dị nro ma dị nkọ n'etiti ụlọ nkwọcha na ntutu isi.
Ịcha mma nke nkwado 2018
Ụzọ edozi edozi 2018, nke e mere n'ụdị osisi, anaghị adaba uru ha. Ha ga-enye ihe ngosi na ịma mma nke oyiyi ahụ, a pụrụ itinye ha n'ọrụ, ma maka kwa ụbọchị ma maka ezumike. Enwere ike ịmepụta osisi ahụ n'ụzọ ndị dị otú ahụ:
mezue ma ọ bụ jiri nlezianya jikọta curls. N'okwu mbụ, ọ ga-ele anya na nke ọma, ma oge a ka a na-ahọrọ nhọrọ nke abụọ, nke nwere ntakịrị nleghara anya, na-enye onyinyo ahụ zest;
obere okpukpu ala ma ọ bụ nke a na-agbakọta;
eji nlezianya na-ese ụyọkọ na-eji akwa ákwà, nke nwere ike itinye ya na ngwa dị iche iche. Ọ nwere ike ịkpụnye mkpịsị aka, nnukwu pearl na rhinestones, okooko osisi a chọrọ mma. Nke a dị mma maka ileta otu mgbede ma ọ bụ ihe oriri;
ọ nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ okpukpu abụọ. Jiri nlezianya na coquettishly lee oghere abụọ dị egwu, dị elu n'akụkụ, a na-ahapụkwa obere ihe ngosi, ebe ha ga-anọ na ọkwa.
Nnukwu Hairstyles 2018
Nnukwu ewu ewu na-ewu ewu 2018 maka ụmụ nwanyị. Anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche nke atụmatụ ha:
n'ụdị nnukwu osisi ụgha nke kwekọrọ na ya;
na-adakwasị n'elu ọdụ ọdụ ịnyịnya ahụ , nke nwere ike ịkụnye gburugburu eriri ahụ na eriri nke na-eme dịka ụda dị mma;
Ntọba nke ụyọkọ ahụ dị n'elu, ebe akụkụ nke curls na-anọgide rụrụ arụ.
Nri edo edo edo edo 2018
Maka mmemme ma ọ bụ ihe omume dị egwu, ị nwere ike ịmepụta edo edo edo edo edo edo 2018. N'etiti ha ị nwere ike ịmata ọdịiche dị otú ahụ:
na ụdị nke "gbanyụọ", tọgbọrọ na ebili mmiri dị mma;
A ga-agbakwunye ihe ndị a na-ahụ maka mgbakọ ahụ site na otu ụzọ eriri na-edozi ahụ;
"Hollywood efe" ga-abụkwa ihe dị mkpa, a pụrụ iji ya mee ogologo oge, na "square" na "bob";
nnọọ coquettishly anya dị ka carelessly tọrọ curls;
Nri abalị ga-abụ ihe na-enweghị atụ, ma ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ ị na-ahọrọ ọ bụla ịzigharị. O nwere ike ịjikọta pigtails nke ọma, na-akpụkọta ọdụ ogologo, nnukwu osisi dị elu ma ọ bụ dị ala, ma ọ bụ jiri ejiji kpaa n'ime ihe ndị a.
Ejiji headbands 2016
Oksana Mukha - Uwe nke mmezu nke afo 2014
Ezumike nke okpomọkụ 2013
Uwe ejiji ndi nwanyi
Ịkpụ ntutu maka ntutu ntutu 2015
Ejiri ejiji maka ihu gbara gburugburu
Ejiji akpụkpọ ụkwụ 2016
Uwe ntutu isi nke nwanyi 2015
Ụdị nke uwe chiffon 2014
Umunwanyi ego Cashmere 2013
Ndị uwe ojii dị mma nke ụmụ nwanyị
Igbe maka ọla na aka aka
Isiokwu nke 10 - Nri Ahụike
Ogologo oge ime ime bụ ụzọ isi gbakọọ n'ụzọ ziri ezi. Obstetric na ezigbo okwu nke ime ime.
Na Jennifer Lopez na ebe siri ike, egwu egwu egwu na-egbuke egbuke!
Cystitis na thrush
Salad na squid na oké osimiri kabeeji
Ngwaahịa nwere ọdịnaya dị elu
Tobex maka ụmụaka
Ebe obibi edozi maka nwa akwụkwọ
Temples nke Samara
Uwe-ncha maka ụmụ agbọghọ
Ngwongwo nlekota maka eji ulo
Kim Kardashian na-ezube ịbacha ahụ
Nri anụ menu
Hilary Swank gbara ya aka
Kedu otu esi eme ka kaadi kaadị?